Warbaahin Carbeed oo War-bixin ka Qortay Qadiyadda Somaliland iyo Soomaaliya | Aftahan News
Warbaahin Carbeed oo War-bixin ka Qortay Qadiyadda Somaliland iyo Soomaaliya
Hargeysa (Aftahannews) – Warbaahinta The New Arab oo wax ka qorta Arrimaha bariga dhexe iyo Afrika, ayaa War-bixin dheer ka qortay Arrimo la xidhiidha Xaaladda runta ah ee dalka Soomaaliya.
MADAXWEYNEYAASHA SOMALIA IYO SOMALILAND FARMAAJO IYO MUUSE BIIXI 2018
The New Arab, oo War-bixinteeda baahisay Shalay, ayaa sheegtay in Dalka Soomaaliya uu u qaybsan yahay Maamul-gobolleedyo hoos taga Dawladda Federaalka ah, balse wuxuu sheegay in aanay Maamulladaasi awood ahaan u sinnayn oo ay kala awood badan yihiin, dhaqaale ahaan iyo nidaam ahaanba.
Warbaahintu waxay sheegtay in Maamullada Puntland iyo Jubbaland yihiin kuwa ugu awoodda badan Maamullada Soomaaliya ka jira, Tusaale ahaana Puntland oo ku taalla Waqooyi-bari dalka Soomaaliya oo dhisnayd tobanaan sanadood waxay leedahay waxyaabo muhiim u ah, sida Deked uu ka soo galo dhaqaale iyo awood aanay Dawladda dhexe ee Muqdisho fadhidaa saamayn ugu yeelan karin arrimaheeda gaarka ah.
Jubbaland oo ku taalla Koonfurta Soomaaliya, ayay The New Arab sheegtay inay tahay Maamul haysta ilo-dhaqaale oo ah Dhul beereed iyo Deked, sidoo kalena taageero ka hesho Dawladda Kenya oo ay jaar yihiin.
Warbaahintu waxa kale oo ay sheegtay in saddexda kale ee Maamul-gobolleed ee Soomaaliya ka dhisan oo kala ah Gal-mudug, Hirshabeele iyo Koonfur-galbeed ay yihiin kuwa ugu Faqiirsan, siyaasad ahaana aan ka Madax-banaanayn Dawladda dhexe ee Xarunteedu tahay Muqdisho, Madaxda Maamulladaa Hagaana ay xulafo la yihiin Madaxda sare ee Muqdisho fadhida.
War-bixintan oo sidoo kale lagu soo hadal-qaaday Qaab-dhismeedka Qabaa’ilka ku salaysan ee Siyaasadda Soomaaliya lagu jaan-gooyo, ayuu The New Arab ku soo hadal-qaaday Somaliland.
The New Arab waxay sheegtay in Somaliland ay Madax-banaanideeda Soomaaliya kala soo noqotay 1991-kii, laakiin Madaxda Soomaaliya ee Muqdisho fadhidaa u aragto inay tahay Maamul lixaad oo ay xukumaan, balse xaqiiqadu aanay sidaasi ahayn oo ay aad uga duwan tahay.
The New Arab, waxay sheegtay in inkasta oo Somaliland aan dunidu u aqoonsanayn Dawlad Madax-banaan, haddana Soomaaliya aanay inyar oo ka mid ah dhulka Somaliland awood maamul ku lahayn, oo ay si gaar ah hawlaheeda u wadato.